चर्चित माओबादी नेताद्वारा एकाएक राजिनामा, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
चर्चित माओबादी नेताद्वारा एकाएक राजिनामा, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ। संसदबाट एमसीसी पारित भए पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोखरेल गम्भिर नैतिक संकटमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रलेनै एमसीसी पारित गराए पछि उनी नैतिक संकटमा परेका हुन्।
एमसीसी विरुद्ध माओवादी केन्द्र भित्र बहस सुरुवात गराउँने जस पोखरेललाईनै जान्छ। तत्कालिन नेकपाकै समय देखी पार्टी भित्रै एमसीसी विरोधी अभियान चलाएका पोखेरेल एमसीसीको सन्दर्भमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले गरेको एक निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट राख्ने एक मात्रै नेता थिए।
एमसीसी बारे सम्पुर्ण डकुमेन्ट सहित सार्वजनिक रुपमा क्याम्पेनिङ चलाइरहेका नेता पाखेरेल आफेनै पार्टी एमसीसीको पक्षमा पुगे पछि स्तब्ध भएका छन्।
माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट मानिने पोखरेलले आफ्नो पार्टीले एमसीसी पारित गरेमा आफुले माओवादी केन्द्र परित्याग गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए।
एक टेलिभिजन सँगको अन्तर्वातामा पोखरेलले माओवादी केन्द्रले एमसीसी पारित गराए आफुले पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए। पोखरेलले माओवादीले एमसीसी पारित गराए पार्टी छोड्छु भनेर घोषणा गरेको क्लिप अहिले सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको छ।
पैसाका लागी आमा बेच्नेहरुले मात्रै एमसीसी राम्रो भन्न सक्ने र एमसीसी बोक्नेहरु सबै साम्राज्यवादका दलाल हुन भनेर बोल्दै आएका पोखरेलले एमसीसी पारित भए पछि खासै सार्र्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट दिनभर पोखरेल मोवाइलको स्विचअफ गरेर बसेका थिए। ओटिभी नेपाल डट कमले पटक पटक टेलिफोन गरेर प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पनि सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन।
अहिले पनी मिडियामा बोल्नबाट टाढै बस्दै आएका उनको मोवाइल स्विच अन भए पनि फोन उठ्न छोडेको छ। स्रोतले ओटिभी नेपाल डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य छैन
भन्ने लाइनमा रहेका नेताहरु माओवादी केन्द्र बाट विद्रोह गर्ने मुडमा पुगेका छन्। लिलामणी सहित गिरिराजमणी पोखरेल,अन्जना विसूंखे लगायतका नेताहरु अब माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड सँग टासिँन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
स्रोतले दाबी गर्दै ओटिभी नेपाललाई दिएको सुचना अनुसार लिलामणी पोखरेलले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छिटो निर्णय गर्न सन्देश पठाएका छन्। सामुहिक बिद्रोह गर्न नसक्ने हो भने आफु एक्लै भए पनि माओवादी केन्द्र बाट अलग हुने सन्देश पोखरेलले श्रेष्ठलाई पठाएको बताइएको छ।
रोचक कुरा त के छ भने पोखरेलकै श्रीमती शशि श्रेष्ठ परमादेशबाट बनको देउवा सरकारको मन्त्री रहेकी छिन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले सम्म एमसीसीको बारेमा कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छैनन्। समर्थन या विरोध कुनैमा पनि उनको आवाज सुनिएको छैन।
तेस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा तालमेलको लागि आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको चार दलीय गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपालका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको कांग्रेस नेता तथा सत्ता गठबन्धन राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
पौडेल बैठकमा सहभागी थिए। चुनावी तालमेलबारे पहिला आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट निर्णय लिने गरी आजको बैठक सकिएको छ ।
आजको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाललेलाई संसद अवरोध नगर्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,
संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की , कांग्रेस नेता पौडेल , माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए ।